Research Database | YUFL
Completed Research (2014- 2019)
1 တရုတ်ဘာသာရှိ အဓိပ္ပာယ်နီးစပ်သော ဝေါဟာရများ ၏ အသုံးအနှုန်းကို လေ့လာခြင်း Khin Nyunt Yi (Lecturer) morphology vocabulary 2014
2 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ ဗဟုဝဏ္ဏစာလုံးများကို လေ့လာခြင်း Khin Hnin Yee (Lecturer) tone vocabulary 2014
3 A Study on the Evaluation of Listening Skills in French for Beginner Level Students. Mi Mi Pyone (Lecturer)
Moe Moe Win (Lecturer)
Su Su Tun (Lecturer) language teaching 2014
4 A Study on Teaching of French asaForeign Language through the Use of Visual Input, Auditory Input and Kinesthetic Input in Basic-Level Class for Myanmar Students. Khin Swe Win (Lecturer)
Khin Phyu Phyu Lin (Tutor) language teaching 2014
5 သင်ရိုးထဲရှိ အဆက်ပစ္စည်းများဆက်ခြင်းဖြင့် ဂျာမန်မှု ပြုထားသော မွေးစားစကားလုံးများကို လေ့လာခြင်း Yin Yin Htay (Assistant Lecturer)
Myint Myint Aye (Assistant Lecturer) curriculum grammar 2014
6 ဂျာမန်ဘာသာ၏ ဝါကျရောဖွဲ့စည်းပုံများအား Phrase Structure Rule အရ လေ့လာခြင်း Ni Ni Htun (Lecturer)
Wai Mar Myint (Assistant Lecturer) curriculum syntax 2014
7 မြန်မာစာရေးဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်နှင့် ဂျာမန်စာရေး ဆရာကြီး Thomas Mann တို့၏ဝတ္ထုများကိုနှိုင်းယှဉ် လေ့လာချက် Thang Kham Dim (Lecturer)
Lei Mon Maung Maung (Tutor)
Sein U Swe (Tutor) reading literature 2014
8 ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို ပထမနှစ် ပြဌာန်းစာအုပ်ပါ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ မှားယွင်းလွယ်ကူသော အသံတူ အနက်ကွဲ စကားလုံးများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Khin Aye (Lecturer)
Saw Eaindar Nwe (Assistant Lecturer)
San San Nu (Lecturer) grammar teaching method 2014
9 ဂျပန်ဘာသာရှိ Tense နှင့် Aspect အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Kyaw Thu (lecturer)
Ei E Mar (assistant lecturer) grammar teaching method 2014
10 ဂျပန်ဝါကျရောဖွဲ့စည်းပုံကို ပုဒ်ဖွဲ့စည်းမှုစည်းမျဉ်းကို အခြေခံလျက် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Khine Khine Zin (lecturer)
May Tin (assistant lecturer) grammar teaching method 2014
11 Peer Response ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဂျပန်ဘာသာ လေ့လာသူများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်မှုအပေါ် တွင် ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးအပြစ်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း Yin Moe Thet (Lecturer)
Aye Phyu Nyein (Tutor)
Phoo Pwint Phyu (Tutor) writing and Reading teaching method 2014
12 မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ကိုရီးယားဘာသာစကားရှိ ပေါင်းစပ်ကြိယာဝိသေသနစကားလုံး တည်ဆောက်မှု ပုံစံအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် Ni Lar Tin (Lecturer)
Shwe Sin Aye (Assistant Lecturer)
Pyae Pyae San (Assistant Lecturer) vocabulary mophology 2014
13 မြန်မာနှင့်ကိုရီးယားဘာသာစကားရှိ အချိန်နှင့် ပတ်သက်သော စကားပုံများအား နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Myint Myint Maw (Associate Professor)
Myat Thida Oo (Tutor)
Aye Mya Thandar Maung (Tutor) language usage 2014
14 ၂၀၁၂ ဇွန်လထုတ် ‘7’ day ဂျာနယ်များမှ ဘာသာ စကားတန်ဖိုးများ လေ့လာချက် Than Than Htay (Lecturer) teaching teaching 2014
15 အညာကျေးလက် လူမှုဘဝ၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ ပွဲတော် များလေ့လာချက် Dr. Yin Yin Than (Professor)
Dr. Shwe Zin Khaing (Assistant Lecturer) culture teaching 2014
16 မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်ရာဇဝင်ဖတ်စာကို ရေးဟန်ပညာ ရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း Dr. Swe Swe Than (Lecturer) teaching teaching 2014
17 မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ပြဌာန်းထား သော တတိယနှစ် (ဝိဇ္ဇာ) သင်ရိုးမှ လယ်တွင်းသား စောချစ်၏ “ပန်းမြိုင်လယ်မှ ဥယျာဉ်မှူး” ဝတ္ထုရှည်မှ စကားအသုံးအနှုန်းလေ့လာချက် Dr.Khaing Khaing Zaw (Lecturer)
Dr. Kyin Thar Myint (Lecturer) teaching teaching 2014
18 ရုရှားဗျည်းများ၏ သံပြင်းနှင့်သံညှင်းများ၏ အသံ ဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာခြင်း Aung Hlaing Myat (Assistant Lecturer)
Aye Min Htut (Assistant Lecturer)
Yu Yu Mon (Assistant Lecturer) phonctics linguistic 2014
19 ရုရှားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားရှိ ပညာရေးနယ်ပယ် ဆိုင်ရာ စကားပုံ၊ ဆိုရိုးစကားများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Win Pa Pa Aung (Assistant Lecturer)
Myat Saw Mu (Assistant Lecturer) culture proverbs & saying 2014
20 ရုရှားဘာသာစကားရှိ ကာရကများဖြင့် တွဲဖက် အသုံးပြုသော ဝိဘတ်များ၏ ထူးခြားချက်များကို လေ့လာခြင်း Ni Ni Shwe (Lecturer)
Nwe Nwe Lwin (Assistant Lecturer) grammar preposition 2014
21 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ကိုယ်ကျင့် တရား၏ အရေးပါမှုကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Dr. Aye Mon Pike (Lecturer)
Khin Maung Yin (Assistant Lecturer)
Shwe Kyay Mone (Assistant Lecturer) ethics ethics 2014
22 သီဟိုဠ်သို့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရောက်ရှိလာပုံကို လေ့လာခြင်း Dr. San San Win (Professor)
Zin Mar Wai (Assistant Lecturer) literature literature 2014
23 Nuclear Politics after Cold War Tin Moe Hlaing (Tutor)
Tin Tin Mar San (Tutor) international relation politics 2014
24 တရုတ်ဘာသာရှိ အနက်တူ ရုပ်သွင်ကွဲ စကားလုံး များကိုလေ့လာခြင်း Than Than Yi (Lecturer)
Thae Phyu Phyu (Tutor)
Phyo Kyi Pyar (Tutor) teaching vocabulary 2015
25 တရုတ်ဘာသာရှိအဆက်ပစ္စည်းများကို လေ့လာခြင်း Thi Thi Thein (Assistant Lecturer) teaching vocabulary 2015
26 အနက်ဆန့်ကျင်သော ဝေါဟာရနှင့် အနက်တူ ဝေါဟာရတို့၏ ထူးခြားချက်နှင့် ကွဲပြားချက်ကို လေ့လာခြင်း Aye Aye Mar (Lecturer) teaching vocabulary 2015
27 တရုတ်ဗျည်းများ၏ အသံအရည်အသွေးကို လေ့လာခြင်း Htet Thu Thu Htun (Assistant Lecturer) teaching consonant 2015
28 ဝိဇ္ဇာပထမနှစ် တရုတ်ဘာသာစကားရှိ ရုပ်သွင်တူ အနက်ကွဲ ဝေါဟာရများကို လေ့လာခြင်း Tin Ko Ko Zin (Assistant Lecturer) teaching vocabulary 2015
29 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ အသုံးများသော ကြိယာ ဝိသေသနများကို လေ့လာခြင်း (အပိုင်း-၂) Khin May Cho (Lecturer)
Su Hlaing Myat (Tutor) teaching vocabulary 2015
30 တရုတ်ဘာသာရှိဝဏ္ဏဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သင်ကြားနည်းကို လေ့လာခြင်း Aye Aye Min(Lecturer)
Phyu Phyu Win (Assistance Lecturer) teaching consonant & vowel 2015
31 ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေါဟာရ၏ ယေဘုယျအခြေအနေ များကို လေ့လာခြင်း Zin Mon Aye (Tutor)
Win Pyae Pyae (Tutor) morphology vocabulary 2015
32 A Study of the Myanmar-English Translation of Metaphoric Expressions in Political Speeches Thida Htun (Professor)
Than Than Win (Lecturer)
Lwin Lwin Hla Pe (Tutor) translation metaphoric expression 2015
33 A Comparative Study of Communicative Approach and Task-based Approach in Teaching Oral Skills to English Diploma Students Khin Than Htay (Assistance Professor)
Zar Myo Thanda (Tutor)
Thet Oo Khine (Tutor) methodology speaking 2015
34 A Study on the Use of Video in Teaching Listening and Speaking Skills to the Pre-intermediate Students Khin Khin Myint (Lecturer)
Thar Htoo (Lecturer)
Mi Mi Khaing (Assistance Lecturer) language skills speaking and listening 2015
35 Strategies for Teaching Listening Skills to the First Year English Specialization Students of Yangon University of Foreign Languages Ye Ye Lwin (Lecturer)
Khine Phyo Wai (Tutor) language skills listening 2015
36 A Study on the Classroom Activities Used in Teaching Figurative Expressions to the Third Year English Specialization Students Yu Yu Win (Assistance Lecturer)
Shwe Yi Htoo (Tutor) language skills figurative expressions 2015
37 A Study on the Classroom Activities Used in Teaching Writing Skills to the Second Year English Specialization Students Aung Zaw Moe (Lecturer)
Nway Nway Myint Aung (Tutor)
Khin Yadanar Than (Tutor) language skills writing 2015
38 A Study on the Problems in Teaching Listening Skills to the Second Year English Specialization Students of Yangon University of Foreign Languages Myo Lwin (Lecturer)
Thet Thet Aung (Tutor)
Nu Mya Wai (Tutor) language skills listening 2015
39 A Study on Teaching Reading Skills to the Third Year English Specialization Students Sabai (Lecturer)
Zin Win Phyo (Tutor)
Aung Kyaw Phyo (Tutor) language skills speaking 2015
40 Developing students’ discussion skills throughabook-club Ni Ni Aung (Lecturer)
Than Than Htay (Lecturer)
Myo Thandar Kyaw (Assistance Lecturer) language skills speaking 2015
41 သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်များမှ စကားလုံး ဖွဲ့စည်းမှုအမျိုးအစားများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Pyoan Pyoan Htay (Lecturer)
Win Win Aye (Assistance Lecturer) curriculum morphology 2015
42 ဂျာမန်ဘာသာကို စွမ်းရည်(၄) မျိုးဖြင့် သင်ကြားရာတွင် အထောက်အကူပြုစေမည့် Activities များကို လေ့လာခြင်း Cherry Soe Lwin (Assistance Lecturer)
Nay Zin Kyaw (Assistance Lecturer)
Tsu Thondri New (Assistance Lecturer) activities teaching methods 2015
43 Modality verb များထဲမှ ~yooda~rasii~mitai အသုံးများကို လေ့လာခြင်း Sandar Win (Lecturer)
Khine Thu Thu Tun (Assistance Lecturer) grammar teaching 2015
44 ဂျပန်ဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာရှိ မျိုးပြစကားလုံး အသုံးအနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Soe Khin Khin (Lecturer)
Lily Tun (Lecturer)
Hnin Hnin New (Assistance Lecturer) grammar teaching 2015
45 စာရေးဆရာ Ogawamimei ၏ ကလေးစာပေ ဖြစ်သော Nobara ၏ ရေးနည်းရေးဟန်ကို လေ့လာခြင်း Win Win Thant (Lecturer)
Soe Soe Than (Assistance Lecturer)
Moe Yu New (Assistance Lecturer) literature culture 2015
46 ဂျပန်ဘာသာသင် ကျောင်းသားများ Kanji ဝေါဟာတိုးတက်စေရန် သင်ကြားရေးရှုထောင့် လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း (အခြေခံအဆင့်၊ ကြားအဆင့်) War War Shein (Assistance Lecturer)
Nan Kham War (Assistance Lecturer) teaching teaching method 2015
47 ဂျပန်ဘာသာ သင်ယူနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ Learning Strategy ကို လေ့လာခြင်း Nan Myant Saw (Lecturer)
Khin Khin Tun (Lecturer)
Kyaw Tun Naing (Assistance Lecturer) teaching learning strategy 2015
48 ကိုရီးယားဘာသာ ဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ်၏သဒ္ဒါသင်ကြားမှု ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Saw Shin Ngwe (Tutor)
Ei Shwe Sin Win (Tutor)
Swe Swe Aung (Tutor) language teaching 2015
49 ကိုရီးယားဘာသာ၏ ဝဏ္ဏဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ခြင်း Sein Sein Aye (Assistance Professor) vocabulary morphology 2015
50 ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ လူမျိုးတို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ် များတွင် ပြုလုပ်သော ရိုးရာအစားအစာများ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် Thandar Kyaw (Lecturer)
Tin Moe Aye (Assistance Lecturer)
Wai Nu San (Assistance Lecturer) culture culture 2015
51 ကိုရီးယားဘာသာစကားရှိ ကံမလိုသော ကြိယာများ ၏ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ လေ့လာချက် Zin Min Phyo (Assistance Lecturer) language syntax 2015
52 မြန်မာ့အလင်း(၂၀၁၃) ခုနှစ်၊ သတင်းစာအာဘော် များမှ ကြိယာဝိသေသန အသုံးများ လေ့လာချက် Myint Myint Khine (Assistance Lecturer)
Khaing Maw Win (Assistance Lecturer) teaching teaching 2015
53 ကြေးမုံသတင်းစာ(၂၀၁၃) ခုနှစ်၊ သတင်းစာ အာဘော်များမှ ကြိယာဝိသေသန အသုံးများ လေ့လာချက် Saw Kay Thwe (Assistance Lecturer)
Hla Ka Nyar Yin (Assistance Lecturer) teaching teaching 2015
54 တတိယနှစ်(ဝိဇ္ဇာ) နိုင်ငံခြားကျောင်းသားသင်ရိုး၊ မစန္ဒာ၏ ဆဌဂံဝတ္ထုမှ ဝေါဟာရများ၏ တန်ဖိုး Aung Thein (Assistance Professor) teaching teaching 2015
55 စကားပုံများမှ ရရှိသော ဘဝအသိအမြင်များ လေ့လာချက် Khin Ohn Mar Aung (Assistance Professor) Me Me Win Mya (Tutor)
Theint Theint Oo (Tutor) teaching teaching 2015
56 ရုရှားစကားပေါင်း အမျိုးအစားများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Htar Htar Thwe (Assistance Lecturer)
Swe Swe Thant (Assistance Lecturer) word linguistic 2015
57 ထိုင်းဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာစကားရှိ ‘မျက်နှာ’ နှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Me Me Tin (Lecturer) vocabulary morphology 2015
58 ထိုင်းဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာစကားရှိ ကြိယာနှင့် နာမ်ဆက်သွယ်မှုကို လေ့လာခြင်း Aye Aye Kyin (Lecturer) vocabulary morphology 2015
59 ထိုင်းဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားရှိ ပေါင်းစပ်နာမ် စကားလုံးများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Su Su Khin (Lecturer) vocabulary morphology 2015
60 တိရစ္ဆာန်နှင့် ပတ်သက်သည့် ထိုင်းစကားပုံများနှင့် မြန်မာစကားပုံများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Khin Hnin Lwin (Lecturer) teaching modifiers 2015
61 မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ “စကားပြောခြင်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသော လမ်းညွှန်ချက် အချို့ကို လေ့လာခြင်း Lè Lè Khaing (Professor)
Thin Thin Mar (Lecturer)
Htike Htike Kyaw (Tutor) buddhist culture ethics 2015
62 အမိန့်တော်များပါ ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဏကို လေ့လာခြင်း(အေဒီ ၁၇၈၂-၁၈၁၉) Khin Moe Moe Than (Lecturer)
Myo Maw Maw (Assistance Lecturer) konboung period economy 2015
63 မင်းပွဲ စိုးပွဲများအကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (အေဒီ၁၇၅၂-၁၈၁၉) Nyo Nyo Tin (Professor)
Mya Phyu Moe (Tutor) late konbaung period culture social 2015
64 ဇာတကပါဠိရှိ ဆိုရိုးများကို လေ့လာခြင်း San San Win (Professor)
Nilar Win (Tutor) literature literature 2015
65 မြန်မာဘာသာစကားရှိ ဝါကျရိုးဖွဲ့စည်းပုံအချို့ကို လေ့လာခြင်း Than Than Htay (Assistance Professor) grammar syntax 2015
66 အတွင်းတည်ငြိမ်မှု မရှိသော မြန်မာနာမ်ပုဒ်များ အကြောင်း လေ့လာချက် Yin Myo Tint (Assistance Professor) noun phrases morphology 2015
67 A Contrastive Study on Social Functions in Myanmar and English Thant Sin Aye (Professor)
Moe Yin Nyein (Lecturer)
Sandar Htay (Tutor) functions sociolinguist-ics 2015
68 A Comparative Study of Verbs with the Prefix ”သ” / ϴa! / in Pa-O and Poe Kayin Languages Naing Naing Htwe (Lecturer) affixes morphology 2015
69 Political Relation between the United States and China Since 2009 Khin May Kyi (Lecturer)
Min Min Thet (Lecturer) international relation politics 2015
70 Civili-military Relations Indonesian Case Winmar Hlaing (Professor) international relation politics 2015
71 တရုတ်ဘာသာရှိ စကားလုံးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ လေ့လာချက် Soe Soe Tint (Lecturer) morphology vocabulary 2016
72 တရုတ်-မြန်မာဝေါဟာရများကို လူမှု ဘာသာဗေဒ ရှုထောင့်မှ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Kay Khine Myint (Lecturer) sociolinguistics vocabulary 2016
73 တရုတ်ဘာသာရှိ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ တိရစ ္ဆာန်များ နှင့်ပတ်သက်သော မျိုးပြစကားလုံးများကို လေ့လာခြင်း Khin Nyunt Yi (Lecturer) grammar vocabulary 2016
74 တရုတ်လူမျိုးတို့၏မွေးနှစ်အလိုက် သတ်မှတ်ထား သော သင်္ကေတ၁၂ မျိုး ပါဝင်သောစကားပုံများ ကို လေ့လာခြင်း Khin Hnin Yee (Lecturer) culture vocabulary 2016
75 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ အသုံးများသော ဝိဘတ် များကို လေ့လာခြင်း Khin Maw Soe (Lecturer) teaching vocabulary 2016
76 အနောက်သို့ခရီးဝတ္ထုမှ အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏စရိုက်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Hla Hla Kyi (Lecturer) culture literature 2016
77 A Case Study on Learning French by Diploma Students Hnin Hnin New (Lecturer)
May Thwe Htoon (Lecturer)
Ei Khine Zin (Assistant Lecturer) language analysis 2016
78 ပြင်သစ်ဘာသာရှိ စကားလုံး ပေါင်းစပ်ပုံကို မြန်မာဘာသာရှိ စကားလုံးပေါင်းစပ်ပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Htet Htet Myat (Assistant Lecturer)
Khin Theingi Tun (Assistant Lecturer) language linguistics 2016
79 Newspaper Reading သင်ကြားခြင်းသည် ကျောင်းသားများ၏ အဖတ်စွမ်းရည်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်၊ မဖြစ် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း Ni Ni Oo (Lecturer)
Myint Myat Soe (Lecturer)
Z Jar Htu Aung (Assistant Lecturer) language analysis 2016
80 DesigningaCourse on ”Business French” for Fourth Year BA Students Mi Mi Pyone (Lecturer)
Su Su Tun (Lecturer)
Sanda Soe Tin (Lecturer) business teaching 2016
81 A Study on Teaching/ Learning French Grammar for Intermediate Level Students Moe Moe Win (Lecturer) language teaching 2016
82 EÚtude sur L’Enseignement de la Production EÚcrite (A Study on the Teaching of Writing Skills) Nilar Tin (Lecturer) language teaching 2016
83 Honore! de Balzac ၏ ဘဝနှင့်စာပေကို လေ့လာခြင်း Wah Wah Htay (Lecturer) literature analysis 2016
84 ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ဂျပန်ဘာသာသင်ယူလေ့လာရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Saw Eaindar New (Assistant Lecturer)
San San Nu (Lecturer) teaching learning moltivation 2016
85 ဂျပန်ဘာသာရှိ အရိပ်အမြွက်ကို ဖော်ပြသော ဝိဘတ်များထဲမှ ‘mo’ ‘dake’ ‘sae’ ‘bakari’ နှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများကို လေ့လာခြင်း Kyaw Thu (Lecturer)
Ei E Mar (Assistant Lecturer) grammar learning moltivation 2016
86 ဂျပန်လူမျိုးနှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အမူအကျင့် (manner) ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း (စားသောက်ပုံ) Khine Khine Zin (Lecturer)
May Tin (Assistant Lecturer) literature culture 2016
87 ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို တတိယနှစ် ယဉ်ကျေးမှုသင်ခန်းစာပါ Edo ခေတ်မှ Meiji ခေတ်သို့ဟူသော အကြောင်း အရာအား လူနေမှုဘဝမှ ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း Thaung Nyunt (Lecturer) literature culture 2016
88 ဂျပန်ဘာသာနှင့်မြန်မာဘာသာရှိမွေးစားစကားလုံး များကို ဝိဇာဘွဲ့ကြို ပထမနှစ်ပြဌာန်းစာအုပ်ကို အခြေခံနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Zin Mar Ohn (Lecturer)
Khin Lay Maw (Lecturer)
Thin Thin Nwet (Lecturer) teaching comparative study 2016
89 မြန်မာဘာသာစကားနှင့်ကိုရီးယားဘာသာစကားရှိ အမူအယာကို ဖော်ပြသော ကြိယာဝိသေသနများ ၏ တည်ဆောက်ပုံကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Nilar Tin (Lecturer)
Shwe Zin Aye (Assistant Lecturer)
Pyae Pyae San (Assistant Lecturer) language morphology 2016
90 မြန်မာနှင့်ကိုရီးယားဘာသာစကားရှိ လှုပ်ရှားမှုပြ ကြိယာဝိသေသနနှင့် မြည်သံစွဲကြိယာဝိသေသန များအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Aye Mya Thandar Maung
(Assistant Lecturer) language usage 2016
91 မြန်မာမှုရွှေဆိုင်းလုပ်ငန်းသုံး ဝေါဟာရများ လေ့လာချက် Aye Thaw Tar (Lecturer)
Thida Oo (Lecturer) teaching vocabulary 2016
92 မြန်မာဘာသာစကားရှိ စကားပေါင်းပစ္စည်းများ လေ့လာချက် Lwin Ni Ni Khine (Tutor) teaching grammar 2016
93 “လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ ဥပစာအသုံးများ” လေ့လာချက် Mya Mya Than (Lecturer) teaching culture 2016
94 မြန်မာဘာသာစကားရှိ ဝါစင်္ဂအသုံးများ လေ့လာချက် Tin Tin Cho (Lecturer) teaching grammar 2016
95 မြန်မာဘာသာစကားရှိ မွေးစားစကားလုံးများ လေ့လာချက် Win Min Aung (Assistant Lecturer)
Nay Zar Lin (Assistant Lecturer) teaching teaching 2016
96 ရုရှားဘာသာစကားနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရှိ ကြောင်းတူသံကွဲစကားလုံးများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Win Win Thaung (Lecturer)
Pann Nu Yi (Tutor)
Khaing Thizar Soe (Tutor) lexical linguistic 2016
97 A Study of Explanation of the Russian Jour Guides of the Interesting Places in Mandalay Mu Mu Khin (Lecturer) language & culture language 2016
98 ရုရှားဘာသာရှိ သမ္ဗဒ္ဓများကို လေ့လာခြင်း Aung Hlaing Myat(Assistant Lecturer)
Yu Yu Mon (Assistant Lecturer) grammar linguistic 2016
99 Mikhail Yurievich Lermontov ၏ကဗျာအချို့ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Win Pa Pa Aung (Assistant Lecturer)
Myat Saw Mu (Assistant Lecturer) literature language 2016
100 မြန်မာ-ရုရှားရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းများကို လေ့လာခြင်း Ni Ni Shwe (Lecturer)
Nwe Nwe Lwin (Assistant Lecturer) culture language 2016
101 kOO နှင့် kh#OO အစဗျည်းပါသော ဆိုရိုးစကားများကို လေ့လာခြင်း KhinThida Soe (Assistant Lecturer)
Ohnmar Aung (Assistant Lecturer) language morphology 2016
102 Arab-Israel conflict in 2015 Tin Moe Hlaing (Assistant Lecturer)
Tin Tin Mar San (Assistant Lecturer) international relation politics 2016
103 အနုပညာနှင့် အနုပညာဝေဖန်ရေးအမြင်အချို့ကို ဆန်းစစ်လေ့လာတင်ပြခြင်း Khin Maung Yin (Lecturer)
Shwe Kyay Mone (Assistant Lecturer) aesthetics art 2016
104 တရုတ်ဘာသာရှိ စကားပေါင်းဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာခြင်း Kyin Than (Lecturer) morphology vocabulary 2017
105 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ ရုပ်လွန်သံရင်း လက္ခဏာများပါဝင်သော ဝါကျများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Than Than Yi (Lecturer)
Thi Thi Thein (Assistant Lecturer)
Su Mon Kyi (Tutor) reading linguistic 2017
106 တရုတ်ဘာသာရှိ ဆက်နွယ်ပုဒ်များ သင်ကြားမှုနည်းလမ်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Aye Aye Mar (Lecturer) teaching grammar 2017
107 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ ပုဒ်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Mya Mya Win (Assistant Lecturer)
Htet Thu Thu Tun (Assistant Lecturer)
Su Myat Wai Zin (Tutor) teaching linguistic and grammar 2017
108 တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ပထမအဆင့်ရှိ စာလုံး အချို့အား လေ့လာခြင်း Tin Ko Ko Zin (Lecturer)
Phyo Kyi Pyar (Tutor) teaching vocabulary 2017
109 အသုံးများသော ကြိယာဝိသေသနများကို လေ့လာခြင်းအပိုင်း(၃) Khin May Cho (Assistant Professor) teaching vocabulary 2017
110 တရုတ်နှင့်မြန်မာရှိ ရာသီပွဲတော်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Phyu Phyu Win (Lecturer)
Aye Aye Min (Lecturer) culture literature 2017
111 A Study of the Difficulties that M.A. (EFL) Students Encountered in Translating News Headlines from Myanmar into English Thida Htun (Professor)
Khine Lwin Zar (Tutor) Translation News Headlines 2017
112 A Study of Reading Strategies Used by First Year Non-English Specialization Students at YUFL Than Than Win (Lecturer)
Kyi Thar Win (Assistant Lecturer)
Hla Myat Thu (Tutor) Language Skills Reading 2017
113 The Effectiveness of an Explicit Language Learning Strategy-based Instruction Used in Developing Listening Skills of Third Year English Specialization Students at YUFL Ni Ni Aung (Assistant Professor)
Hsu Myat Sandar (Tutor) Language Skills Listening 2017
114 A Study on Listening Strategies Used by First Year English Specialization Students at YUFL Khin Khin Myint (Lecturer)
Hnin Haman Oo (Assistant Lecturer)
Hnin Le Yee (Tutor) Language Skills Listening 2017
115 A Study on the Writing Skills Development in YUFL Second Year English Specialization Students through Critical Thinking Skills Aung Zaw Moe (Lecturer)
Lwin Lwin Hla Pe (Assistant Lecturer) Language Skills Writing 2017
116 A Study of Mother Tongue Influence on the First Year English Specialization Students’ Writings Than Than Htay (Lecturer) Language Skills Writing 2017
117 The Strategies Used in Teaching Writing to Second Year English Specialization Students at YUFL Yee Yee Lwin (Lecturer)
Nan Win Yu Maung (Assistant Lecturer)
Naw Phoo Pwint Thi (Tutor) Methodology Writing 2017
118 A study on Improving Writing Skills of First Year English Specialization Students at YUFL Aye Aye Thant (Lecturer)
Mi Mi Khaing (Assistant Lecturer)
Thet Thet Aung (Assistant Lecturer) Language Skills Writing 2017
119 A Study on Developing Students’ Reading Skills through In-class Reading Activities Myo Lwin (Lecturer)
Myo Thandar Kyaw (Assistant Lecturer) Language Skills Reading 2017
120 ဂျာမန်ဘာသာရှိ Particle များနှင့် ၄င်းတို့၏ အသုံးပြုပုံကို လေ့လာခြင်း Hsu Thondri New (Assistant Lecturer)
Cherry Soe Lwin (Assistant Lecturer)
Nay Zin Kyaw (Assistant Lecturer) speaking skills grammar 2017
121 ဂျပန်စကားပုံများ၏ နောက်ကွယ်မှ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်း အကြောင်းကို လေ့လာခြင်း Yin Moe Thet (Lecturer)
Aye Phyu Nyein (Assistant Lecturer)
Phoo Pwint Phyu (Assistant Lecturer) literature culture 2017
122 မြန်မာအပြောဘာသာစကားနှင့် အရေးဘာသာစကားရှိ ဝိဘတ်အသုံးများ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် Swe Swe Than (Lecturer) teaching teaching 2017
123 မြန်မာဘာသာစကားမှ အရေးနှင့် အဖတ် အသံထွက် ကွဲပြားမှုများလေ့လာချက် Khaing Khaing Zaw (Lecturer)
Kyin Thar Myint (Lecturer) teaching teaching 2017
124 ပထမနှစ် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပင်ရင်းစကားပြေသင်ကြားနည်း လေ့လာချက် Saw Kay Thwe (Assistant Lecturer)
Hla Ka Nyar Yin (Assistant Lecturer) teaching teaching 2017
125 လယ်တွင်းသားစောချစ်၏ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူးဝတ္ထုမှ ဝေါဟာရတန်ဖိုးများ Phyu Phyu Khine (Lecturer)
Thu Rein Wint Wint Han (Tutor) teaching vocabulary and words 2017
126 မြန်မာဘာသာစကားရှိ ဓလေ့သုံးစကားများ လေ့လာချက် Thiri Zaw (Assistant Lecturer)
Shwe Yi Myat Mon (Tutor)
Thatoe Aung (Tutor) teaching teaching 2017
127 မြန်မာဘာသာရှိ ကြိယာထောက်အသုံးများ Me Me Win Mya (Assistant Lecturer)
Theint Theint Oo (Assistant Lecturer) teaching grammar 2017
128 ထိုင်းပေါင်းစပ်ကြိယာစကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို မြန်မာအဓိပ္ပါယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Su Su Khin (Lecturer) language morphology 2017
129 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမများကို အသုံးပြု၍ မြန်မာဘာသာမှ ထိုင်းဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း Me Me Tin (Lecturer) language translation 2017
130 ထိုင်းဆိုရိုးစကားများနှင့် မြန်မာဆိုရိုးစကားများကို သဒ္ဒါရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း Aye Aye Kyin (Lecturer) language morphology 2017
131 Historical Perspective on Maha Dhamma Yanthi Eindawya Zedi Thin Thin Aye (Assistant Professor)
Mya Phyu Moe (Assistant Lecturer) late komboung period culture 2017
132 US Foreign Policy Towards Cuba Khin May Kyi (Lecturer)
Min Min Thet (Lecturer) international relation politics 2017
133 Migrant Issues in Europe Winmar Hlaing (Professor)
Thida San (Assistant Professor) international relation politics 2017
134 မြန်မာဘာသာစကားစာစု တည်ဆောက်ရာတွင်တွေ့ရှိရသော ဝါစင်္ဂအမျိုးအစား သတ်မှတ်မှု အခြေအနေများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Theingi Htar (Tutor) word classes corpus linguistics 2017
135 ဦးတိုး၏ ရာမရကန်မှ ဗျည်းတူစကားသံစိစစ်ချက် Aye Mya Mya Soe (Assistant Lecturer) linguistis stylistics stylistics 2017
136 မြန်မာနိုင်ငံသီတင်းကျွတ်ပွဲတော်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမီးမျှောပွဲ အကြောင်း နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း San San Win (Professor)
Yu Yu Khaing (Tutor)
May Thu Aung (Tutor) literature culture 2017
137 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ အဆင့်တူသမ္မဒ္ဓများဖြင့် ဆက်ထားသော ဝါကျရောများအား လေ့လာခြင်း Soe Soe Tint (Lecturer)
Win Win Mar (Lecturer) teaching linguistics and grammar 2018
138 တရုတ်-မြန်မာကြိယာ၊အကြိမ်ရေပြ၊ မျိုးပြစကားလုံးများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Kay Khine Myint (Lecturer) lexicology + semantics linguistics 2018
139 တရုတ်ဘာသာရှိ ဓလေ့သုံးစကားလုံးများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Han Nwe Swe (Tutor)
Kyi Phyu (Tutor) teaching vocabulary 2018
140 တရုတ်ဘာသာစကားရှိ နာမ်နှင့်တွဲဖက်သုံးနိုင်သော အမျိုးအစားပြ စကားလုံးများ၏ ထူးခြားချက်လေ့လာခြင်း Khin Hnin Yee (Lecturer) teaching vocabulary 2018
141 A Study on the Style of French Author “Colette” Through “Claudineal’ Ecole” Mi Mi Pyone (lecturer)
Phyu Phyu Khin (Lecturer)
Z Ja Htu Aung (Assistant Lecturer) language Literature 2018
142 A Study of the Productive skills for French Language Learners (Intermediate Level) Su Paing Swe (Tutor)
Khin Su Yi Nyunt (Tutor) language teaching 2018
143 The Professional Development for Teachers of French asaForeign Language in Myanmar Moe Moe Win (Lecturer) language teaching 2018
144 ဂျာမန်စကားလုံးဖွဲ့မှုကို လေ့လာခြင်း Pyoan Pyoan Htay (Lecturer)
Phyu Thida (Lecturer)
Win Win Aye (Lecturer) linguistics mophology 2018
145 ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို ဒုတိယနှစ် (A2) အဆင့်တွင် ရွေးချယ်ကောက်နှုတ် ထားသော ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ဒေသန္တရဗဟုသုတ အကြောင်းအရာ များကို activities များ အသုံးပြု၍ သင်ကြားနည်းစနစ်ကို လေ့လာခြင်း Yin Yin Htay (Assistant Lecturer)
Mya Kay Khine (Assistant Lecturer) speaking skills teaching methods 2018
146 ဂျာမန်ဘာသာစကားနှင့်မြန်မာဘာသာရှိ Personal Deixis နှင့် ၄င်းတို့၏ အသုံးပြုပုံကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Thandar Myint Thu Soe (Assistant Lecturer)
Khin Yamon Aye (Assistant Lecturer) curriculum linguistics 2018
147 Business German သင်ကြားရာတွင် အသုံးပြုသော Activities များကို လေ့လာခြင်း Saw Yu Nwe (Assistant Lecturer)
Wai Mar Myint (Assistant Lecturer) curriculum teaching methods 2018
148 မြန်မာနှင့်ဂျာမန်ဘာသာ စကားတို့မှ ဆို၇ိုးစကားများကို သဒ္ဒါရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း Thang Khan Dim (Lecturer)
Lei Mon Maung Maung (Assistant Lecturer)
Sein U Swe (Assistant Lecturer) curriculum grammar 2018
149 ဂျပန်ဘာသာစကားရှိ (Ko, So, A) အသုံးအနှုန်းများကို သင်ကြားရေးရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း Soe Khin Khin (Lecturer)
Wai Wai (Lecturer)
Hnin Hnin New (Lecturer) teaching teaching method 2018
150 ကိုရီးယားဘာသာစကားရှိ မျက်လုံးနှင့် ဆိုင်သော ဓလေ့သုံးများကို အတ္တဗေဒရှုထောင့်မှ သရုပ်ခွဲ လေ့လာခြင်း Myint Myint Maw (Assistant Lecturer) language semantics 2018
151 မြန်မာစကားပုံများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဆင်တူသော ကိုရီးယားစကားပုံများ လေ့လာနှိုင်းယှဉ်ချက် Sein Sein Aye (Assistant Professor) language usage 2018
152 အင်းဝခေတ်လူအမည်များနှင့် ဂုဏ်ရည်ပြအနက် Lwin Ni Ni Khine (Assistant Lecturer) teaching semantics 2018
153 ထိုင်းဘာသာရှိ လုံးထပ်စကားလုံးများနှင့် မြန်မာဘာသာရှိ လုံးထပ်စကားလုံးများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Khin Hnin Lwin (Lecturer) language morphology 2018
154 ထိုင်းဘာသာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို ကျောင်းသားများတွင် တွေ့ရသော ဦးဆောင်စကားလုံးများ၏ ပြဿနာများ KhinThida Soe (Assistant Lecturer)
Ohnmar Aung (Assistant Lecturer) language morphology 2018
155 An Analytical Study of Common Errors & Mistake Found in Myanmar Print Media Thant Sin Aye (Professor)
Sandar Htay (Assistant Lecturer) error analysis applied linguistics 2018
156 မြန်မာအဖြည့်စကားများကို လက်တွေ့အတ္တဗေဒ ရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း Yin Myo Tint (Assistant Professor) cooperation implicature pragmatics 2018
157 စစ်အတွင်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆောင်းပါးမှ သိပ္ပံမောင်ဝ၏ ရေးဟန်ကိုလေ့လာခြင်း Nwe Ni Tin(Assistant Professor)
Naing Naing Htwe (Lecturer) linguistis stylistics stylistics 2018
158 Myanmar-China Relations after political Reform in Myanmar since 2012 Thant Yin Win (Lecturer)
Kyaw Lin Htun (Lecturer) international relation politics 2018
159 နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) တရုတ်ဘာသာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်ပါ တရုတ်စကားပုံများအား ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း Hla Hla Kyi (Professor) teaching vocabulary 2019
160 ရုရှားဘာသာစကားရှိ တွဲဖက်စကားလုံးများကို လေ့လာခြင်း Win Win Thaung (Lecturer)
Khaing Thizar Soe (Tutor) lexical linguistic 2019
161 တရုတ်ဘာသာရှိအသုံးများ သော စကားဆက်များကို လေ့လာခြင်း (အပိုင်း-၁) Khin May Cho (Professor) teaching vocabulary 2019
162 မြန်မာ-တရုတ်နှစ်ဘာသာရှိ မျိုးပြစကားလုံးများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Aye Aye Mar (Lecturer) teaching vocabulary 2019
163 မြန်မာဘာသာစကားရှိ ဝိဘတ် “ကို” နှင့်တရုတ်ဘာသာစကားရှိ ဝိဘတ် “dui” “gei” “ba” တို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Khin Maw Soe (Lecturer) teaching vocabulary 2019
164 မြန်မာ-တရုတ်ဘာသာစကားရှိ မြည်သံစွဲစကားလုံးများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Than Than Yi (Lecturer) teaching vocabulary 2019
165 Chinese Characters and China’s Traditional Culture Thi Thi Thein (Lecturer) teaching culture 2019
166 တရုတ်နှင့်မြန်မာဘာသာရှိ ဝါကျရိုးများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Mya Mya Win (Lecturer)
Htet Thu Thu Htun (Lecturer) syntactic linguistics 2019
167 မြန်မာနှင့်ကိုရီးယားဘာသာ စကားရှိ စကားထာ များကို လေ့လာခြင်း Tin Moe Aye (Lecturer)
Wai Nu San (Lecturer) language usage 2019
168 မြန်မာဘာသာနှင့်ကိုရီးယား ဘာသာစကားရှိ ရှေ့ဆက် ပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Zin Min Phyo (Lecturer) language morphology 2019
169 မြန်မာနှင့်ကိုရီးယားဘာသာ စကားရှိ အဆက်ပစ္စည်းများနှင့် ကြိယာဝိသေသန ဖွဲ့စည်းပုံအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း Nilar Tin (Associate Professor)
Myat Thida Oo (Assistant Lecturer) grammar morphology 2019
170 ရုရှားဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားရှိ အနက်တစ်ခုထက် ပိုသော ကြိယာများ၏ ကွဲပြား ခြားနားချက် များကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Soe Soe Yee (Associate Professor)
Swe Swe Thant (Lecturer)
Aye Myint Kyaing (Lecturer) lexical linguistic 2019